करिनाको दोस्रो छोराको नाम हो ‘जेह’, ज्योतिषले बताए यस्तो अर्थ ! – Ktm Dainik
करिनाको दोस्रो छोराको नाम हो ‘जेह’, ज्योतिषले बताए यस्तो अर्थ ! - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
करिनाको दोस्रो छोराको नाम हो ‘जेह’, ज्योतिषले बताए यस्तो अर्थ !
करिना कपुर र सैफ अलि खानको आफ्नो दोस्रो छोराको नाम ‘जेेह’ राख्ने फैसला गरेका छन् । उनीहरूको दोस्रो छोराको जन्म २१ फेब्रुअरी २०२१ मा भएको थियो ।
केही महिनादेखि उनीहरूको दोस्रो छोराको नाममा प्रतीक्षा भइरहेको थियो । यसैबिच उनीहरूले आफ्नो छोराको नाम के राख्लान् भनेर जोसुकै अनुमान लगाइरहेका थिए ।
उनीहरू आफ्नो दोस्रो छोराको नामको विषयमा केही महिना देखि चुपचाप बसिरहेका थिए । उनीहरू आफ्नो गल्ती दोहोराउन चाहन्न थिए । यसैबिच उनीहरूको पहिलो छोरो तैमुरको नामको विषयमा पनि निकै विवाद भएको थियो । त्यसैले करिना र सैफ अलि खान दोस्रो छोराको जन्म अघि देखि नै सार्वजनिक ठाउँ र मिडियाहरू बाट टाढिएका छन् ।
धेरै समयको अन्तराल पछि करिनाले आफ्नो दोस्रो छोराको नाम सार्वजनिक गरेकी हुन । रिपोट्सका अनुसार सैफ र करीनाले आफ्नो दोस्रो छोराको नाम ‘जेह’ राखेका छन् । यो कुराको पुष्टि कुरिनाको पिता रणधीर कपुरले सार्वजनिक गरेका हुन । ज्योतिषीका अनुसार यो नामको अर्थ धेरै राम्रो रहेको बताएका छन् । आउनुस् जानो के रहेछ ‘जेह’ को अर्थ ।
‘जेह’ को अर्थ के हो ?
ज्योतिषविद्का अनुसार ‘जेह’ एक आफैमा अर्थपूर्ण शब्द हो । यसको अर्थ हुन्छ ‘To Come’ फिर्ता आऊ, फर्किए । कुनै नराम्रो काम वा खतराको दृष्टिबाट बाहिर आऊ भन्ने अर्थ बुझाउँछ । यो एउटा निकै राम्रो र सकारात्मक नाम रहेको ज्योतिषीको ठम्याई छ ।
यस नामको ठेट अर्थ भने ‘ बच्चा जन्मिए पछि परिवार तथा दुनियाँमा धेरै खुसी आउँछ । शुभ हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । यो एउटा सकारात्मकताको प्रतीक पनि हो । के हो त ‘जेह’ नामको महत्त्व ? ज्योतिषविद्का अनुसार जेह शब्दले सात अङ्क भन्ने अर्थ बुझाउँछ । ज्योतिषका अनुसार यो शब्दको जोडफल चार, सात र आठ हुन आउँछ ।
यो सङ्ख्याहरूले यस्तो अर्थ बुझाउँछ कि । यस बच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति हुन सक्छ । सांसारिक भावना सुख मोज मस्तीबाट टाढा नै रहन्छ । यस भन्दा अरू यो कुराको सम्भावना बढेर जान सक्छ कि यस्तो सङ्ख्या देखिएका व्यक्तिहरू वैवाहिक जीवनबाट टाढै रहन चाहिन्छन् । यिनीहरूलाई बिजनेसमा कुनै चासो रहने छैन ।
यिनीहरू दुनियाँ सँगै टाढै रहने सम्भावना हुन्छ । ज्योतिषका अनुसार यस्ता व्यक्तिहरू सन्त बन्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । यस्ता व्यक्तिहरू दान- धर्म गर्न निकै रुचाउँछन् । यस्ता कुरामा विश्वास राख्छन् ।
ज्योतिषहरू यस्ता कुराहरू पनि बत्ताउँछन् कि, नाम अनुसार उनीहरूको आफ्नो आमा सँग पनि भावनात्मक सम्बन्ध धेरै राम्रो हुन्छ । यस्ता बच्चाहरू भावनात्मक र दया वान हुन्छन् । साथसाथै उनीहरूलाई आफ्नो भाग्यले धेरै कुराहरू पनि प्राप्त हुन्छ ।